Shabeelaha Hoose,Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Shabeelaha Hoose,Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya
Pateinets leaving MSF's Hospital in Afgooye, Somalia © Hugues Robert
Degaanka Xaawo Cabdi, ayaa MSF waxa ay ku maamushaa waax bukaan-socod, waax bukaan-jiifka carruurta ah, iyo xarun daweynta daacuunka iyo shubanka, barnaamij nafaqeyn, biyo-dhaamin iyo qaybinta bustayaal iyo agab kale oo aan cunto ahayn.
Afgooye ayaa MSF waxa ay taageertaa waxqabayada cusbitaalka iyada oo bixisa daawooyin iyo sidoo kale waxa ay waddaa barnaamij quudinta bukaan-socodka ah.
Sanadkii 2009kii, 162,782 qof ayaa la-talin iyo dareel caafimaad oo lacag la’aan ah ku heley tas-hiilaadkan, in ka badan kalabar waxa ay ahaayeen carruur ka yar shan sano jir. Dhammaadkii Agoosto, ka dib markii ay kordheen dadka qaba jadeecada ee yimid xarunta caafimaadka MSF ee Afgooye, ayaa kooxaheennu waxa ay olole ballaaran oo tallaal ka bilaabeen waddada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. 31,785 carruur ah ayaa la tallaaley, 296 qof ayaa la daweeyey muddadii u dhaxaysey dhammaadkii Agoosto ilaa Oktoobar.
Wararkii ugu dambeeyay ee Mashrrucyada Gobolka Shabeelaha Hoose